चिकित्सक र नर्सिङ संघ बोल न ?
काठमाडौं । चिकित्सक र नर्सिङ संघ छ । छ भने किन बोल्दैनन् ?
डाक्टर र नर्सहरुलाई चाहिने के हो, के के सामाग्री, सुविधा भयो भने डाक्टर नर्सहरु काममा खटिन सक्छन् । यो बेला फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने भनेको नर्स र डाक्टर नै हुन् । तिनलाई चाहिने सामाग्री जुटाइदिने सरकारले हो । यसका लागि जनस्तरबाट समेत चासो र सक्रियता देखिएको छ । यसकारण चिकित्सक संघ, चर्स संघले बहालवाला र अवकाश प्राप्त सबैलाई आह्वान गरेर देशका सामु, मानव सभ्यताका सामु आइपरेको यो महाविपत्तिसँग जुध्न किन आह्वान गर्न नसकेको हो ?
कोरोना संक्रमितले तातोपानीसम्म नपाएको गुनासो सामाजिक सञ्जालमा देखिन्छ । रुघा लागेका बिरामीलाई समेत छिछिः दूरदूर गर्ने गरिएको घटना पनि घटेका छन् । कतिलाई कोरोना कोरोना भनेर जिस्क्याउने, अपमानित गरिएका पनि छन् । यसकारण कोरोना सावधान नभए जसलाई पनि हुनसक्छ र कोरोनासँग लड्नु सबैको मानवीय धर्म हो भनेर बुझाउन अवेर भइसक्यो ।
हो, सत्ताधारीलाई कोरोना भ्रष्टाचार गर्ने अवसर बनेको छ । कोरोना भाइरसभन्दा भ्रष्टाचार भाइरस कडा देखिन्छ । त्योभन्दा ठूलो नैतिक पतनका श्रृंखला सुरु हुनथालेका छन् । यो हाँसो ठट्टा गर्ने बेला होइन भन्ने कुरा जनजनमा फैलाउन अबेर गर्नु आत्मघात हुनेछ ।
जति चिकित्सा पेशामा छन्, उनीहरुले योगदान गर्ने बेला यही हो । उनीहरुलाई राज्यले दिनुपर्ने साधनस्रोत, सुविधा दिउँ, उपचारमा खटाउँ ।